YEYINTNGE(CANADA): Sunday, August 15
15 April 2010 ဒိုင်ယာရီ
15 August 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/15/20100အကြံပြုခြင်း
ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း | တနင်္ဂနွေနေ့၊ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၅၆ မိနစ်
အင်္ဂလိပ်နဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံတို့ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကမ္ဘာကို အုပ်စီး ဗိုလ်ကျခဲ့တာကြောင့် တခြား လူမျိုးတွေရဲ့ မျိုးချစ် စိတ်ဓါတ်ကို နားမလည်ကြဘူး။
The DongFeng 21 (DF-21, NATO code name: CSS-5)
တရုတ်နဲ့ အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးနဲ့ စစ်အင်အား ပြိုင်ဆိုင်မှုက နိုင်ငံတိုင်းကို အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိတယ်။ လက်ရှိ NLD နဲ့ ဒေါ်စု တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး ဗျူဟာကလည်း အနောက် နိုင်ငံတွေကို အားကိုးပြီး နအဖ ကို စေ့စပ်ရေး စကားဝိုင်းထဲ ဆွဲခေါ်မယ် ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်က ရုံးမထွက် နိုင်သေးဘူး။
U.S.S George Washington CVN73
စီးပွားရေးကို မကိုင်နိုင်ဘဲ စစ်အင်အားကို ထူထောင်ရင်း နိုင်ငံပြိုကွဲသွားရတဲ့ ဆိုဗီယက်ပုံစံကို အတုခိုးမှာလား၊ စီးပွားရေးကို အနိုင်ကိုင်ပြီး ချမ်းသာလာမှ ချမ်းသာမှုကို အရင်းပြုပြီး စစ်အင်အားကို တဖြည်းဖြည်း ထူထောင်လာတဲ့ တရုတ်ပုံစံကို အတုခိုးမှာလား။
Chinese Fleets : North / East / South fleets
မကြာသေးတဲ့ ၂ဝ၁ဝ နှစ်လယ်လောက်က အမေရိကန်စစ်တပ်က အသံထက် အဆပေါင်းများစွာမြန်တဲ့ Hypersonic ဒုံးကျည်ကို စမ်းသပ်ခဲ့ရာ တရုတ်စစ်တပ်က ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေမှာ မဟာဗျူဟာကျတဲ့ အနုမြူလက်နက် (Strategic Nuclear arms) နဲ့ နည်းဗျူဟာ အနုမြူလက်နက် (Tactical Nuclear Arms) ဆိုတာရှိပါတယ်။ မဟာဗျူဟာ လက်နက်က အနုမြူစစ် ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော် တမြို့လုံး၊တပြည်လုံးကို ဖျက်စီးနိုင်တဲ့ အနုမြူ လက်နက် အကြီးစားတွေပါ။ နည်းဗျူဟာ လက်နက် ဆိုတာကတော့ တိုက်ပွဲတပွဲ အတွက်အသုံးလိုမယ့် လက်နက်ပေါ့။ ဥပမာ အနက်ကြီး တူးထားတဲ့ တရုတ်နဲ့ မြန်မာလိုဏ်ခေါင်းမျိုးကို ဖျက်ဆီးဖို့ပေါ့။
ဒီလိုလက်နက်မျိုးတွေကို သယ်ဆောင်ဖို့ ဒုံးပျံလက်နက်လိုအပ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ဒုံးပျံတွေဟာ မဟာဗျူဟာအတွက်သုံးတဲ့ အဝေးပစ် ဒုံးပျံတွေကလွဲလို့ အင်မတန်နှေးပါတယ်။
ဥပမာ သမ္မတ ကလင်တန် လက်ထက် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ ကင်ညာ နဲ့ တန်ဇန်းနီးယား မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်သံရုံးတွေ ဗုံးဖေါက်မှုကိုလက်စားချေတဲ့ အနေနဲ့ အိုစမာဘင်လာဒင်ရှိတဲ့ အာဖဂန်က တာလီဘန် လေ့ကျင့်ရေး စစ်စခန်းတခုကို cruise missile နဲ့ ပစ်ခွင့် ပေးလိုက်တယ်။ ဒီဒုံးကျည်ကို ပစ်နိုင်တဲ့ ရေငုပ်သင်္ဘောက ၆ နာရီ အကွာမှာပဲရှိတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်စခန်းကို ဒုံးကျည်ကျတဲ့ အချိန်မှာ ဘင်လာဒင်ကြီး မရှိတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ယနေ့ မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်တွေ အာဖဂန်နဲ့ ဘင်လာဒင်တို့အပေါ် ၂၄ နာရီ ပျံဝဲနေကြရတာပေါ့။ ပစ်မှတ်ကိုတွေ့တာနဲ့ ချက်ချင်းပစ်နိုင်အောင် စီစဉ်မှုပါ။
ဒီအားနည်းချက်ကိုပြင်ဖို့ အမေရိကန် စစ်တပ်ကအားထုတ်ခဲ့တယ်။ ဦးတည်ချက်က တကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ ကြိုက်တဲ့ ပစ်မှတ်ကို ၁ နာရီအတွင်း ရောက်စေရမယ်တဲ့။ ဒီလက်နက်က ကင်ဂျုံအီးတို့ မူဂါဘီတို့ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေတို့ကို ကျောချမ်းစေမယ့် လက်နက်မျိုးပါ။ ဥပမာ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေကို ပစ်မှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပြီ ဆိုပါစို့၊ အမေရိကားက ပစ်ရင်တောင် ၁ နာရီအတွင်း ပစ်မှတ်ကိုရောက် နိုင်တာကြောင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကသော်လည်းကောင်း ထိုင်းရေပိုင်နက်က သော်လည်းကောင်း ပစ်ရင် ၅ မိနစ်နဲ့ နေပြည်တော်ကို ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ အိမ်နဲ့ စစ်ရုံး အသွား ကြားမှာတင် ဒုံးပျံ မိုးရွာနိုင်တာပေါ့။
ဒါ့အပြင် မြန်မာ့ တပ်မတော်ရဲ့ Military Doctrine လို့ခေါ်တဲ့ စစ်ရေးအတွေးအခေါ်ဟာ တရုတ်က ခိုးချထားတာပါ။ တရုတ်က ပြင်ဆင်သတ်မှတ် မွမ်းမံခဲ့တာ အဆင့် ၄ ဆင့် ရောက်သွားပါပြီ။ မြန်မာက ဒုတိယအဆင့်လောက်ပဲ ရောက်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်ကသာ တကယ်တိုက်လိုတယ် ဆိုရင် ဘန်ကာတွေကို ဖြိုခွဲနိုင်တဲ့ဗုံးတွေနဲ့ စစ်မြေပြင်ပစ် အနုမြူဗုံးတွေကို သုံးခဲ့ရင် မြန်မာမပြောနဲ့ တရုတ်လိုဏ်ခေါင်းတွေတောင် မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာတွေကို တိုင်းသူပြည်သားတွေ ကျန်းမာချမ်းသာရေးအတွက် မသုံးဘဲ ကြောက်ကြောက်နဲ့ လိုဏ်ခေါင်းတွေ တူးနေတာ စစ်ရေးအရကြည့်ရင် အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးလို့ ငြင်းချက်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကို လူငယ်၊ လူလတ် မြန်မာ့တပ်မတော်က အရာရှိတွေကို သိစေချင်ပါတယ်။
ယနေ့ ကမ္ဘာ့စစ်လက်နက်တွေအထဲမှာ ၅ဝ မီဂါတန်ရှိတဲ့ ဟိုင်ဒြိုဂျင်ဗုံးတွေ ရှိနေပါပြီ။ ဟီရိုရှီးမားကို ကြဲခဲ့တဲ့ဗုံးထက် အဆ ၄,ဝဝဝ ပြင်းထန်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နျုထရွန်ဗုံး (neutron bomb) ဆိုတာက အဆောက်အဦးတွေကိုမပျက်စီးပဲ အနုမြူဓါတ်ရောင်ခြည် (radiation) နဲ့ ရန်သူကို သုတ်သင်တဲ့ နည်းပါ၊ စစ်သားတွေသာသေမယ့် ဗုံးမျိုးပါ။
ယနေ့ တိုးတက်ထွန်းကားလာတဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ လူအမြောက်အများကို သေကြေဖျက်ဆီးနိုင် ရုံမက ကျောက်ခေတ် ပြန်ရောက်သွားအောင် ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ လက်နက်တွေအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိကြတာမို့ စစ်ကိုရှောင်လိုကြပါပြီ။ တရှိန်ထိုး တိုးတက်လာတဲ့ တရုတ်တွေဟာ တကယ်တော့ အခုမှ ချမ်းသာမှုကို ခံစားကြရတုန်းမို့ မပျက်စီးလိုပါဘူး။ တရုတ်တွေ ယနေ့အထိ ကျင့်သုံးနေတဲ့ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး ပေါ်လစီဟာ တိန်လျောက်ပိန် ချပေးသွားတဲ့ "taoguangyanghui" ပေါ်လစီလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်က အခြေအနေမသာသေးရင် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ငြိမ်ငြိမ်နေ၊ ကိုယ်အပေါ်ဆီးအသာရဖို့ အခွင့်အရေးစောင့်ပါတဲ့။
တရုတ်ကြီးဟာ မြောက်ဖက်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တောင်ဖက်မှာ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်တို့နဲ့ ကျွန်းတချို့ကို သူပိုင် - ငါပိုင် အငြင်းပွားဆဲပါ။ ဒါပေမဲ့ တိန်လျောက်ပိန်ဟာ ဘယ်လောက်နိုင်ငံရေးပါးဝ နိုင်ငံရေး လျင်သလဲဆိုရင် ဒီပြဿနာတွေကို ကိုင်တွယ်ဖို့ တို့တတွေ ဉာဏ်မကြွယ်သေးပါဘူးတဲ့။ နောက်ခေတ် ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြေရှင်းကြပါစေဆိုပြီး ရှောင်ထွက်ခဲ့တယ်။ အရင်ကဆိုရင် စစ်ရေးပြချင်တဲ့ တရုတ်ကြီးဟာ ရေနံပေါတဲ့ ဒီကျွန်းတွေကို ရေနံဖေါ်ပြီး အတူတူဝေစား ကြရအောင်လို့ အဆိုပြုခဲ့တယ်။
စစ်အေးကာလမှာ အမေရိကန်နဲ့ ဆိုဗီယက် ရှရှားတို့ စစ်လက်နက် အပြိုင်တပ်စဉ်က M.A.D. (Mutual Assured Destruction) ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီကို ကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်။ နင်ရောငါပါ နှစ်ယောက်လုံးသေမယ် ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီကြောင့် ဘယ်သူကမှ စစ်မဖြစ်ရဲကြဘူး။
မော်စီတုံး ကွန်မြူနစ်တွေလက်ထက်က တရုတ်ပြည်ကြီးဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲတတိယနိုင်ငံအဆင့်ပဲ ရှိပါတယ်။ အခု တိန်လျောက်ပိန် ကွန်မြူနစ်တွေ လက်ထက်မှာ ကွန်မြူနစ် ဆိုတာနာမည်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ မကြာခင် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး အဆင့်ကိုရောက်တော့မယ်။ တိုးတက်လာရင် ချမ်းသာလာရင် မပျက်စီးချင်တော့တာ လူ့သဘာဝပါ။
တရုတ်ပြည်ကိုရောက်ဖူးသော စာဖတ်သူတို့ သိကြမှာပါ။ ဘေဂျင်းမြို့က ဝါရှင်တန် ပြန်ရောက်လာရင် ခေတ်မီမြို့ကြီးကနေ တောမြို့ကလေးကို ပြန်ရောက်သွားသလို ခံစားရတယ်။ ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာ လွပ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်ထက် မြင့်တဲ့ အဆောက်အဦးမဆောက်ရဆိုတဲ့ တားမြစ်ချက် ရှိပါတယ်။ သစ်လွင်တောက်ပနေတဲ့ ရှန်ဟိုင်းကနေ နယူးယောက်ကို ပြန်ရောက်သွားရင် အို ညစ်ပတ် ဟောင်းနွမ်းလှချည်လားလို့ ခံစားရတယ်။ တရုတ်ဘဏ်တွေဟာ ငွေပေါလွန်းလို့ ဘယ်မှာ အရင်းပြု ရမှန်းတောင် မသိကြဘူး။ ရှန်ဟိုင်း လေဆိပ်ကိုဆင်း လိုက်တာနဲ့ (ကချင်း ကချင်း) ဆိုတဲ့ (ငွေ) ခေါ်သံ ကြားနေရပြီ။
ဒီလောက် တိုးတက်ပြီး ချမ်းသာလာတဲ့ တိန်လျောက်ပိန် တရုတ်တွေဟာ ဆင်ရဲမွဲတေနေတဲ့ သေမထူး နေမထူးတဲ့ (မော်) တရုတ်တွေလို ဘယ်မိုက်ပါ့မလဲ။ ဒါကြောင့် တိန်လျောက်ပိန်က “ချမ်းသာခြင်းသည် ဂုဏ်တရပ်” လို့ ရဲရဲကြီး ဆိုရဲခဲ့တာပေါ့။ (Deng Xiaoping proclaimed, “To get rich is glorious”)
အမေရိကန်ရော တရုတ်ကြီးတွေဟာ လူလည်ကြီး သားသမီးတွေပါ၊ ခြောက်စား ဟောက်စား နေကြတာပါ။ အမေရိကန် ကောင်းဘွိုင်ဟာလည်း ခြောက်စားလို့ မရရင် ဟဲဟဲ ဆိုပြီး နောက်ဆုတ် သွားမှာပဲ၊ ဆွန်ဇူး ရဲ့ စစ်မတိုက်ရဘဲ အနိုင်ရတဲ့နည်းကို ကျင့်သုံးနေကြတာပါ။
တရုတ်ကော အမေရိကန်ပါ အမျိုးချစ်စိတ် ပြင်းကြတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ နိုင်ငံတွေမို့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်ဂုဏ်ယူကြတယ်၊ အမျိုးချစ်စိတ်ပြင်းပါတယ်။ စစ်တပ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်အတွက်ပါ ဆိုတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်က စစ်ဗိုလ်တွေကို စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။
စီးပွားရေးကို မကိုင်နိုင်ဘဲ စစ်အင်အားကို ထူထောင်ရင်း နိုင်ငံပြိုကွဲသွားရတဲ့ ဆိုဗီယက်ပုံစံကို အတုခိုးမှာလား၊ စီးပွားရေးကို အနိုင်ကိုင်ပြီး ချမ်းသာလာမှ ချမ်းသာမှုကို အရင်းပြုပြီး စစ်အင်အားကို တဖြည်းဖြည်း ထူထောင်လာတဲ့ တရုတ်ပုံစံကိုအတုခိုးမှာလား။
နိုင်ငံ့သယံဇာတတွေကို ရောင်းချပြီး ၅၇ သန်းသော ပြည်သူတွေ ငတ်ချင်ငတ် သေချင်သေ သုံးမရတဲ့လိုဏ်ခေါင်းကြီးတွေတူးပြီး ကြွက်တွေလို တွင်းအောင်းနေကြမှာလား။
နိုင်ငံ့သယံဇာတ တွေကိုရောင်းချပြီး တိုင်းပြည်ကြီးပွားအောင် လုပ်ပြီးမှ တည်တံ့မယ့် စစ်တပ်ကို ချမ်းသာမှုကတဆင့်ထူထောင်ဖို့ မစဉ်းစားမိဘူးလား။ စီးပွားရေးတိုးတက်ချင်ရင် အရာရာကို စစ်တပ်ကချည်း အုပ်စီးချင်လို့ မရဘူး၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ သင့်မြတ်ရမယ်။
အနုမြူလက်နက်ပိုင်ရင် ကိုယ်ကခြိမ်းခြောက်နိုင်သလို ကိုယ့်ဆီမှာလည်း အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တယ် ဆိုတာ စဉ်းစားမိကြရဲ့လား။
တတိုင်းပြည်လုံးလည်းမွဲ၊ လက်တဆုပ်စာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ သူတို့သားသမီးဆွေမျိုးတစု မိတ်ဆွေတစု ကောင်းစားရေးအတွက် ၅၇ သန်းသော လူထု ကိုဖိနှိပ်ပြီး လက်နက်ကိုင်ပြီး သစ္စာစောင့်နေကြတဲ့ ဗိုလ်ကြီး၊ ဗိုလ်မှူး၊ ဗိုလ်မှူးကြီးတွေ ညည ဘယ်လို အိပ်ပျော်ကြသလဲဆိုတာကို သိချင်လှပါဘိ။
အင်္ဂလိပ်ကျွန်ဘဝက လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရဲဘော် ၃ ကျိပ် ဂျပန် ပါးရိုက်တာကိုခံပြီး စတင် ထူထောင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို တရုတ် စီးပွားရေးကျွန်ဖြစ်အောင် တဖြည်းဖြည်း ဆွဲချနေတယ်ဆိုတာ သိမှသိပါလေစ။
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ကြီးပွားတာကို မြင်ချင်မှာပဲ၊ ကိုယ်ြ့ပည်သူ ပြည်သား အများစားဝတ်နေရေး ချောင်လည်ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြစ်နေတာကို မြင်ချင်မှာပဲ။ ဝါဒတွေ ဘာတွေ မလိုပါဘူး။
၂ဝဝ၉ နှစ် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအချိန်ကြီးမှာ တရုတ်ပြည်မှာ နှင်းမုန်တိုင်းတွေကျပြီး ရထားတွေ၊ ကားတွေ မထွက်နိုင်ဘူး။ အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်ကုန်တယ်။ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် ရောက်လာပြီး လော်ကြီးနဲ့ ရှေ့က ကြပ်မတ်နေတယ်။
လူတွေအိမ်ကို ဖုံးဆက်နိုင်ပါစေဆိုပြီး ဖုံးဘထ္ထရီအတွက် ပလပ်ပေါက်တွေကို ဘူတာရုံ ကားဂိတ်တွေမှာ စီစဉ်ပေးတယ်။ မြေငလျင်လှုပ်တော့လည်း ဝန်ကြီးချုပ် ရောက်သွားပြီ၊ သမ္မတ ဟူဂျင်တောင်လည်း ချက်ချင်းရောက်လာတယ်။ ဒါခေါင်းဆောင်တွေက ပြည်သူကို ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ ပြတာပဲ။ ဒါကြောင့် တရုတ်တွေဟာ ဝန်ကြီးချုပ်ကိုချစ်ကြတယ်။
အမေရိကားမှာ နယူးအော်လင်းမြို့ ကက်ထရီနာ လေမုန်တိုင်းကြောင့် ရေလျှံအပြီးမှာ သမ္မတဘုရှ် က လေယာဉ်ပျံပေါ်ကပဲ ပျံကြည့်တာကြောင့် ဝိုင်းဆဲလိုက်ကြတာ Katrina moment ဆိုတဲ့ ဗန်းစကား ပေါ်လာခဲ့ရတယ်။ ဒါတောင် ဘုရ်ှဟာ အမေရိကန်တွေထိရင် ဓါးကြည့်ဆိုတဲ့ လူစားမျိုးပါ။ နာဂစ် မုန်တိုင်းကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်းမှာ လူတွေသေပြီး ဘယ်လောက်ကြာမှ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးအကဲဆိုသူ တိုင်းခန်းလှည့်လည်လာပါသလဲ။ နိုင်ငံတကာက ဝိုင်းကူကြတဲ့ ငွေတွေကိုကော အမှန်အကန် ဝေကြရဲ့လား။ အခုလည်း ပါကစ္စတန်မှာ ရေကြီးပြီး လူတွေသေနေချိန်မှာ သမ္မတက အင်္ဂလန်သွားလည်နေရလားဆိုပြီး ဝိုင်းဆန္ဒပြနေကြလေရဲ့။ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူကိုချစ်တယ်ဆိုတာ လိမ်လို့မရပါဘူး။
၁၉၅ဝခုနှစ်တွေထဲက တနှစ်မှာ ယိုးဒယားစစ်ခေါင်းဆောင် ဖိဘွန်ဆွန်ကရမ်းဟာ မြန်မာပြည်ကို အလည်လာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည် တိုးတက်နေတာမြင်ပြီး ပါလာတဲ့ သူ့ဝန်ကြီးတွေကို ဒုဝန်ကြီးချုပ် (နိုင်ငံတော်စီးပွားရေး) ဦးကျော်ငြိမ်းအရှေ့မှာ စိတ်ဆိုးပြီးဆဲလိုက်တာ၊ အနှစ်(၂ဝ) မအိပ်မနေ ကြိုးစားရင်တောင် မြန်မာပြည်ကို မမှီနိုင်ဘူးဆိုပြီး ဆူလိုက်ဟောက်လိုက်တာ။ ဗိုလ်ကြီး၊ ဗိုလ်မှူး၊ ဗိုလ်မှူးကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်အများစု ဘန်ကောက်လောက်တော့ ရောက်ကြမှာပါ။ ဘယ်လောက် ကွာသွားပြီလို့ ထင်ပါသလဲ။
ထိုင်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက တိုင်းပြည်ကြီးပွားချင်စိတ် ရှိသေးတယ်။ တိုင်းပြည် နဲ့ အမျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာ ယူနီဖေါင်းက လာတာမဟုတ်ပါဘူး၊ အူထဲ၊ ရင်ထဲ၊ နှလုံးထဲ၊ အသည်းထဲက လာတာပါ။ စစ်ဗိုလ်ကြီးတွေ ညည နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် အိပ်ပျော်နိုင်ကြပါစေ။
သြဂုတ်လ၊ ၉ ရက်၊ ၂ဝ၁ဝ
ရည်ညွန်းသောစာအုပ်၊ စာတမ်းနှင့် ဆောင်းပါးများ
A daring departure from Deng By Wu Zhong, China Editor, Asia Times Online
Chinese missile could shift Pacific power balance. By Eric Talmadge, Associated Press Writer, August 8 2010, NY Times.
DongFeng 21 (CSS-5) Medium-Range Ballistic Missile – Sinodefence.com
New Chinese anti-ship missile may complicate relations with U.S. By Erik Salvin, Stars and Stripes, Published: July 19, 2010
How Carrier Battle Groups Work by Marshall Brai
This is How the Carriers Will Die by Gary Brecher
PLA Navy: From 'Green Water' to 'Blue Water' – Part I & Part II
PLA Navy - Globalsecurity.com
China Under Deng Xiaoping, factsandetails.com
နှင်းပန်းအိမ် | တနင်္ဂနွေနေ့၊ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၃၆ မိနစ်
န.အ.ဖ ကို တကျပ်ဘိုး ယုံရင် ကျမတို့ ပြည်သူလူထုကို တကျပ်ဖိုး သစ္စာဖောက်တာပဲ။
ပြည်သူ့ဆိုင်မှာ ဆန်လာထုတ်တဲ့ အိမ်ရှင်မတွေ ဆီစာအုပ်၊ ဆန်အိတ် ထည့်ထားတဲ့ ဆွဲခြင်း လက်ချိတ်ပြီး ကြွေးကြော်သံတွေ တိုင်ကြတယ်။
စစ်အာဏာရှင်က လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ မြို့နယ်အလိုက် အမတ်တွေကို ဝယ်တဲ့အခါ အဝယ်ခံခဲ့သူတွေလဲ ရှိတယ်။
အသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလများ၊ စိတ်ကူးယဉ်မှုများ နှင့် ကစားဝိုင်း ကို ပြောင်းလဲစေသောဝိညာဉ်များ
The Spirit Changed the Trends_final
Canada responds to release of election date in Burma
(No. 257 – August 14, 2010 – 4:10 p.m. ET)
The Honourable Lawrence Cannon, Minister of Foreign Affairs, today issued the following statement in response to the announcement of November7as the date for elections in Burma:
“While Canada welcomes the Burmese military regime’s commitment to hold democratic elections, we have serious concerns that the elections will be held under oppressive conditions and that they will not be conducted in line with international standards.
“Canada calls on the regime to live up to its commitments to hold free and fair elections by unconditionally releasing all political prisoners, including Aung San Suu Kyi, engaging in genuine dialogue with members of the democratic opposition and different ethnic groups within Burma, and enabling full democratic participation in the process.
“Canada has imposed the toughest sanctions of any country against the Burmese regime to protest its treatment of the Burmese people, and will continue to engage with all stakeholders that are working towardademocratic Burma.
“The people of Burma deserve to have their voices heard without fear of intimidation and violence. Canada continues to support freedom, democracy, human rights and the rule of law.”
တပ်မတော်သာ အမိ / အဖ = NO
တပ်မတော်သာ အမိ တပ်မတော်သာ အဖ = လက်မခံဘူး
အင်းစိန် မီးရထား ဂုံးတံတား ပေါ်တွင် ကပ်ခဲ့သော (၈)လေးလုံး ဝမ်းနည်းခြင်း ပို့စကဒ်
ဒီလိပ်စာတွေ အတိုင်း ပို့ခဲ့ကြတယ်။
၇ လပိုင်း ၁၅ ရက်နေ့ မှ စတင်ပြီး ကျနော်တို့ လူထုတရပ်လုံးအတွက် စတေးခံ အကောင်းဆုံးမြေသြဇာ အဖွဲ့မှ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းသို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ၊ဒီဆိုင်းဗုဒ်ကို ဖြုတ်ချပေးရန်ပြတ်ပြတ်သားသား တောင်းဆိုခြင်း ဆိုတဲ့ စာဖိုင်တွေကို မြန်မာပြည်တွင်း စာတိုက်များမှ နေပြီး စစ်အစုိးရ ရုံးများ၊ဝန်ကြီးဌာနများ၊ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ပါတီ အဖွဲ့အစည်းများ ၊ နအဖ ဒေါက်တိုင်များနှင့် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့အားလုံးသို့ ပို့ဆောင်မေးမြန်းခြင်း လှုတ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိပြီး ၈-၈-၂၀၁၀ ရက်နေ့တွင်လည်း အင်းစိန် မီးရထား ဂုံးတံတား ပေါ်နဲ့ တပ်ခွဲတခွဲ တပ်ဆွဲထားရာ အင်းစိန် ဘောလုံးကွင်း ရှေ့ဘက်တွင်လည်း စာရွက်များ ကပ်ခြင်း နှင့် ၈- လေးလုံး ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ပို့စကဒ်များ ကပ်ခြင်း လှုတ်ရှားမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်သူသာ အမိ ပြည်သူသာ အဖ ဖြစ်ရမည်။
အသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလများ၊ စိတ်ကူးယဉ်မှုများ နှင့် က...